Phila Amaxabiso e-Forex & Iitshati-Funda ukurhweba
Funda amaxabiso ama-2 amaxabiso orhwebo kunye neetshathi ngowona mthombo wamaxabiso entengiso kuwo omabini amaqonga e-forex, ii-indices, izinto zorhwebo kunye nee-cryptocurrencies. Cofa isixhobo sohlalutyo oluhlaziyiweyo kwaye uluse kwinqanaba elilandelayo ngokubona ukuba zeziphi ezinye izinto ezinokuthengiswa ezinxulumene nesi sibini.
Idatha yeMarike TradingView
MALUNGA NEERHAFU EZIPHILAYO
Ivenkile eyiNye yokumisa kuzo zonke iiNkcukacha zakho zeNtengiso
Indawo yokufunda iRhafu yokuRhweba eyi-2 sisixhobo esinqumlayo somrhwebi onolwazi. Nokuba unomdla wokubandakanya i-forex, ii-indices, ikamva, okanye iimarike ze-cryptocurrency, lonke ulwazi olubalulekileyo lusezandleni zakho. Ukusuka kutshintsho lwamva nje kumaxabiso aphilayo e-forex kuhlalutyo lweemarike oluvela kubarhwebi abangamagqala kwihlabathi liphela, i-Learn 2 Trade Live Rates portal inokunceda ukuthatha urhwebo lwakho uye kwinqanaba elilandelayo.
Funda iiRhafu eziRhoqo zoRhwebo oluPhambili
Funda i-2 yoRhwebo ipapasha ibhidi yexesha-lokwenyani kwaye ibuze amaxabiso kuzo zonke izibini ze-forex, ii-indices, izinto zorhwebo kunye neemali ezihamba kunye zedijithali. Amaxabiso okuphila kwangaphambili abekwe esweni liQela loRhwebo lokuFunda 2 kwaye asetyenziselwa uhlalutyo kunye nophuhliso lweempawu zokuthengisa. Ukuze uhlale ungoku, amaxabiso aphilayo asasazwa ngqo kwiimarike, zihlaziywa rhoqo kwimizuzwana emihlanu. Indibaniselwano yedatha evela kubanikezeli beempahla ezihamba phambili zehlabathi, amaxabiso okuphila kwangaphambili ayindawo elungileyo ukuqala xa ufuna ikhowuti echanekileyo.
Ukufikelela kwiNtengiso: Ukutshata, imiqondiso kunye namaxabiso aphilayo
Ukufikelela kwidata yokuthengisa kunye nokuhlala kwimarike kubalulekile ekusindeni kwindawo yentengiso yedijithali- ngaphandle kwayo, umrhwebi osebenzayo usesichengeni esikhulu. Ngokucofa kuso nasiphi na isixhobo, uya kuthunyelwa kwi-interactive, umzuzu omnye itshathi ebonisa amaxabiso entengiso akhoyo kunye namaxabiso aphilayo. Iitshathi zingenziwa ngokwezifiso zakho. Khetha uhlobo lwetshathi oluthandayo, isakhelo sexesha, okanye ukongeza isimboli oyifunayo ukuthelekisa iimveliso ngexesha langempela.Ukongeza kwitshathi kunye nedatha yamanqanaba e-forex yedatha, uya kubona ukuba ngaba kukho imiqondiso esebenzayo yempahla ekhethiweyo. Ukucaciswa kwesignali njengokuthenga / ukuthengisa kwaye uthathe inzuzo / amanqanaba okulahleka ayafakwa. Amalungu ePremiyamu anakho ukujonga ixabiso lokungena lazo zonke iimpawu zokurhweba eziphilayo.